Ihe Chineke Ga-eme​—Otú Chineke Ga-esi Enyere Anyị Aka
ỤLỌ NCHE JULAỊ 2014
Baịbụl gwara anyị hoo haa ihe Jehova na Ọkpara ya, bụ́ Jizọs Kraịst, ga-eme ahụhụ Setan bụ́ Ekwensu na-akpatara ndị mmadụ. Ọ sịrị: “Ọ bụ ihe a mere e ji mee ka Ọkpara Chineke pụta ìhè, ya bụ, ka o wee bibie ọrụ Ekwensu.” (1 Jọn 3:8) A ga-ewepụ ọchịchị ụwa a nke e ji anyaukwu, ịkpọasị, na ihe ọjọọ ndị ọzọ mara. Jizọs kwukwara na “a ga-achụpụ onye na-achị ụwa a,” ya bụ, Setan bụ́ Ekwensu. (Jọn 12:31) Ebe ọ bụ na Setan agaghịzi na-akpa ike, ụwa ga-aghọ paradaịs. Ndị ezi omume ga-anọ na ya, udo ga-adịkwa na ya.—2 Pita 3:13.
Oleekwanụ ihe ga-eme ndị siri ọnwụ na-eme ihe ọjọọ? Chebara nkwa a Chineke kwere echiche. Ọ sịrị: “Ọ bụ ndị ziri ezi ga-ebi n’ụwa, ọ bụkwa ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta ka a ga-ahapụ n’ime ya. Ma a ga-ebipụ ndị ajọ omume n’ụwa; a ga-efopụkwa ndị na-aghọ aghụghọ na ya.” (Ilu 2:21, 22) Ndị ọjọọ agaghịzi anọ. N’oge ahụ udo ga-adị, ndị na-erubere Chineke isi ga-eji nke nta nke nta zuo okè.—Ndị Rom 6:17, 18; 8:21.
Olee otú Chineke ga-esi ewepụ ihe ọjọọ n’ụwa ọhụrụ ahụ? Ihe ọ ga-eme abụghị ịnapụ ndị mmadụ ikike o nyere ha ka ha na-ekpebiri onwe ha ihe ha ga-eme, ọ gakwanụghị eme ka ha dịrị ka ígwè nkịtị na-anaghị eche echiche. Kama, ọ ga-akụziri ndị na-erubere ya isi iwu ya. Ọ ga-enyekwara ha aka ka ha ghara ịna-eche echiche na-adịghị mma ma ọ bụ na-akpa àgwà ọjọọ.
Chineke ga-ewepụ ihe niile na-akpatara ndị mmadụ ahụhụ
Oleekwanụ ihe Chineke ga-eme ọdachi ndị na-emere onwe ha? O kwere nkwa na obere oge ugbu a, Alaeze ya ga-achịwa ụwa. Onye Chineke họpụtara ka ọ chịwa n’Alaeze ya bụ Jizọs Kraịst. Jizọs nwere ikike ịgwọ ndị ọrịa. (Matiu 14:14) Jizọs nwekwara ikike ime ka osimiri, ikuku, na ihe ndị ọzọ ghara imebisị ihe. (Mak 4:35-41) N’ihi ya, mgbe ọ ga-achịwa, ndị mmadụ agaghịzi na-ata ahụhụ n’ihi “oge ọdachi na ihe a na-atụghị anya ya.” (Ekliziastis 9:11) N’oge ahụ, o nwekwaghị ihe ọjọọ ga-eme ụmụ mmadụ.—Ilu 1:33.
Oleekwanụ ihe a ga-eme ọtụtụ nde mmadụ aka ha dị ọcha bụ́ ndị ọnwụ kpọlara n’ike? Obere oge tupu Jizọs akpọlite enyi ya Lazarọs n’ọnwụ, Jizọs kwuru, sị: “Abụ m mbilite n’ọnwụ na ndụ.” (Jọn 11:25) N’eziokwu, Jizọs nwere ikike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ibi n’ụwa mgbe ihe ọjọọ ọ bụla na-agaghị eme ndị ezigbo mmadụ, jisie ike na-amụ Baịbụl ka ị matakwuo ezi Chineke na ihe ndị o bu n’obi ime. Ndịàmà Jehova bi gị nso ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ka i mee otú ahụ. Anyị na-agba gị ume ka ị kpọtụrụ Ndịàmà Jehova bi gị nso, ma ọ bụkwanụ gị edetara ndị bipụtara Ụlọ Nche a akwụkwọ ozi.
mailto:?body=Otú Chineke Ga-esi Eme Ka Ihe Ọjọọ Kwụsị%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014484%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Otú Chineke Ga-esi Eme Ka Ihe Ọjọọ Kwụsị
JULAỊ 2014 Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?
mailto:?body=JULAỊ 2014 Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw14%26issue%3D20140701%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=JULAỊ 2014 Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?